Mpempe akwụkwọ nke Mpempe Akwụkwọ Mpempe Ihe Ngwaọrụ na Decoiler Straightener Maka Press Line Maka igwe anaghị agba nchara na elu esemokwu
Nkọwa:Nhazi eriri maka presses presses,Onye na-enye ihe nkiri CompactFeed, CompactFeed eriri igwe ,Kọmpat udia nri maka stamping akuko,Onye na-enye ihe ndozi ndozi,Nri Cost Straightener
Home > Ngwaahịa > Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ > Kọlụm nri nri
Ngwaahịa nke Kọlụm nri nri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Nhazi eriri maka presses presses , Onye na-enye ihe nkiri CompactFeed suppliers / factory, wholesale high-quality products of CompactFeed eriri igwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Kọmpat coft feed line nke presses  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat coft feed line nke presses
Kọmpat eriri igwe nri akara STA MPING AKUKO Mpempe akwụkwọ ntinye akwụkwọ nke igwe mpempe akwụkwọ bụ usoro igwe eji eme ihe n’ebe niile iji mepụta akụkụ maka ọrụ dị iche iche, dịka stamping akpati, ihe elektrọniki na stamping na wdg. N'ime ụlọ...
China Kọlụm nri nri Ngwa
Ngwunye eriri igwe nri kọlụm maka akụkụ akụkụ akpa stamping uzo aghota ihe edoziri edozi maka ihichapu eriri mkpi ozo dika levellers maka idozi ihe di elu na uzo idozi ihe nwere nkenke nkenke maka idi nkuku di elu.
Emebere sistema a ihe ruru 12.0mm na steepụ ikike ya dị elu nke chọrọ ịgba ọsọ na kọmpat. Oke kachasị dị obosara na-arụ ọrụ, dabere na ụdị straighener, bụ ihe dịka 1800 mm.
Usoro ihe mmemme pịa nri ga - achọpụta na ntinye anya, ịgbatị na nri maka ihe ndị dị arọ.
Nhazi eriri maka presses presses Onye na-enye ihe nkiri CompactFeed CompactFeed eriri igwe Kọmpat udia nri maka stamping akuko Onye na-enye ihe ndozi ndozi Nri Cost Straightener Ngwa nri maka Press Ngwa nri maka ike pịa